မြေပုံ - ဘူမိဗေဒ. မြေပုံ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာမြေ သို့မဟုတ် ၎င်
မြေပုံ - ဘူမိဗေဒ. မြေပုံ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာမြေ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းတခု၏ ဒေသဆိုင်ရာ သွင်ပြင်၊ အခြေအနေများကို သင်္ကေတများဖြင့် အမှန်တကယ် တည်ရှိနေသော အရွယ် ..
အင်ကြင်းရွာ - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင်၊ မြေပုံမြို့နယ်ရှိ အင်ကြင်းရွာ. အင်ကြင်းကွင်း - ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ အင်ကြင်းကွင်းရွာ. အင်ကြင်းရွာ၊ စညှင်း - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင်၊ မြေပုံမြို့နယ်ရှိ အင်ကြင်းရွာ. အင်ကြင်းကုန်း - ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ အင်ကြင်းကုန်းရွာ.
ဥက္ကံရွာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်. ဥက္ကံရွာမ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်. ဥက္ကံရွာ၊ မောင်ငယ်၊ လပွတ္တာမြို့နယ်. ဥက္ကံမြို့. ဥက္ကံရွာ၊ သနပ်ဖက်၊ လပွတ္တာမြို့နယ်. ဥက္ကံရွာ၊ ယိုးဆနွင်း၊ မြေပုံမြို့နယ်. ဥက္ကံရွာ၊ သင်္ဃန်းကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ်.
"Dota - Defense of the Ancients"ဟုအမည်ရသောဂိမ်းသည် နိုင်ငံတကာတွင် ရေပန်းအစားဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည်။ 9ယောက်တစ်ဖွဲ့သော် လည်းကောင်းတစ်ဖွဲ့ ၅ ယောက်နေပြီး လက်စွမ်းပြရသော ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ထိုဂိမ်းအားစတင်ဆော့ကစားရန် လူ ၂ယောက် သို့ ဘော့ တစ်ယောက်လိုသည်။. Dota ကိုတည်ထောင်သူမှာ Ice Frog ဖြစ်သည်။ Blizzard မှထုတ်လုပ်သော World of Warcraft - Frozen Throne မှ World Editor ကိုမှီး ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးဖြင့်ရေးဆွဲထားသောမြေပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
လွမ်နမ်ထာ ပြည်နယ်သည် လာအိုနိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက်ရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၆ မှ ၁၉၇၆ ခုနှစ်အထိ ဟွာခုင်ပြည်နယ်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လွမ်နမ်ထာ ပြည်နယ်သည် ၉,၃၂၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ၎င်း၏ပြည်နယ်မြို့တော်မှာ လွမ်နမ််ထာ ဖြစ်််််ပါသည်။အဆိုပါပြည်နယ််််သည် မြောက်ဘက်တွင် ယူနန်ပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်နှင့် အရှေ့တောင် ဥထုံဆိုင်ပြည်နယ်၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ဘိုကေအိုပြည်နယ်၊ အနောက်တောင်ဘက်နှင့် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တိို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပါသည်။
ထီးခီး သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်ရှိသော တနင်္သာရီတိုင်းတွင်ရှိသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်/ထွက်ပေါက်တစ်ခု၏ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းဒေသအမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ "ထီးခီး-ဖူနာရွန်"နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်ကို ၂၀၁၃-ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၈-ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထီးခီးနယ်စပ်ဂိတ်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဤဒေသတွင် ထီးခီးကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုလည်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ လာရောက်ဖွင့်လင့်ထားသည်။
ယူဂိုဆလားဗီးယား ဆားဘီးယား ၏ နိုင်ငံတော် နှင့်အတူ Austro-Hungarian အင်ပါယာ သည်၎င်းသည်ဒေသသည် Ottoman အင်ပါယာ နှင့်ဩစတြီးယား - ဟန်ဂေရီတို့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရာရာစုနှစ်များစွာ အကြာတွင်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ် တောင်ဆလာဗစ်လူမျိုး၏ပထမဆုံးပြည်ထောင်စုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဆားဘီးယားမှပီတာ ၁ သည်၎င်း၏ ပထမဆုံးအချုပ်အခြာအာဏာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ပါရီရှိ သံအမတ် များ၏ ညီလာခံတွင် နိုင်ငံတော်သည်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်ကိုနိုင်ငံတော်၏တရားဝင်အမည်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁။ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဇလဗေဒဌာနခွဲသည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ မြစ်ရေဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နေ့စဉ် မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်များထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊ မြစ်ရေကြီးခြင်း သတိပေးချက်နှင့် အခြေအနေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန် ပေး၍ ဇလဗေဒဆိုင်ရာ သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကို ကာကွယ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ သင်္ချာပုံစံပြု Model များဖြင့် မြစ်ရေခန့်မှန်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် UNDP/WMO Project ဖြင့် ကွန်ပျူတာများနှင့် သင်္ချာပုံစံပြု Model များအား အဆင့်မြှင့် တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် JAXA ...
မ ပ မ သည မ န မ န င င ရခ င ပ ည နယ မ က ဦ ခရ င တ င ပ ဝင သ မ ပ မ နယ ရ စ က မ ဖ စ သည မ ပ မ သည ဟန တ ပင လယ အ ကမ ခ ရ
မ ပ မ နယ သည မ န မ န င င ရခ င ပ ည နယ မ က ဦ ခရ င ရ မ နယ တစ ခ ဖ စ သည မ နယ ရ စ က ရ မ မ မ ပ မ ဖ စ သည ခ န စ
မ ပ ရ မ ပ GAD, Feb 2011.
မ ပ ရ အင ဂလ ပ Myaypon သည မန တလ တ င ဒ သက ပ င ဦ လ င ခရ င ပ င ဦ လ င မ နယ ရ ခ င က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
မ ပ ရ GAD, Feb 2011.
မ ပ ဆ ပည မ ပ ရ ဆ ခ င အတတ ပည cartography ဆ သည မ ကမ ဘ မ သ မဟ တ င အစ တ အပ င တခ ဒ သဆ င ရ သ င ပ င အခ အန မ က သင က တမ ဖ င
မ န မ န င င ဒ မ ကရ စ လမ ပ မ ပ ခ က တရ ဝင ခ ဆ Roadmap to Discipline - flourishing Democracy က ဗ လ ခ ပ က ခင ည န မ ရက ဩဂ တ လ
မ တ က အမ ပ ည သ ခရ သ လ ရ မ န င သက ဆ င သ လမ မ ဂ ဟ တ မ ပ မ က ဆ င ရ က ပ သည Google Maps အ ခ န စ ဖ ဖ ဝ ရ လတ င လ င တင ခ သည
က င တ ခရ င မ င ယန မ နယ ရ မ နယ ခ အဆင ရ မ တစ မ ဖ စ သည ခရ င မ ပ - ရ မ ပ ည နယ အရ ပ င မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ စက တင ဘ
က င တ မ အန က ဘက က လ မ တ အက တည ရ သည GoogleEarth ခရ င မ ပ - ရ မ ပ ည နယ အရ ပ င မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ စက တင ဘ
ရ စ က ရ မ လည ဖ စ သည ရ မ ပ ည နယ အရ ပ င အတ င ရ ခရ င မ ပ မ ပ မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ MIMU အ က တ ဘ
လ ဝင မ က က ပ ရ န င ပ ည သ အင အ ဝန က ဌ န မ pp. ခရ င မ ပ - ရ မ ပ ည နယ အရ ပ င မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ စက တင ဘ
ပန ဆန မ နယ ရ မ တစ မ ဖ စ သည ရ မ ပ ည မ က ပ င တ င ရ ခရ င မ ပ မ ပ မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ အ က တ ဘ3March
လ ဝင မ က က ပ ရ န င ပ ည သ အင အ ဝန က ဌ န မ pp. ခရ င မ ပ - ရ မ ပ ည နယ မ က ပ င မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ
လ ဝင မ က က ပ ရ န င ပ ည သ အင အ ဝန က ဌ န မ pp. ခရ င မ ပ - ရ မ ပ ည နယ တ င ပ င မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ စက တင ဘ
လ ဝင မ က က ပ ရ န င ပ ည သ အင အ ဝန က ဌ န မ pp. Google Maps ခရ င မ ပ - ရ မ ပ ည နယ တ င ပ င မ န မ သတင အခ က အလက စ မ ခန ခ မ ယ နစ စက တင ဘ
မြေပုံ, ဘူမိဗေဒ. မြေပုံ,